महिलाको हत्या आरोपमा चार जना पक्राउ, एक फरार - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
महिलाको हत्या आरोपमा चार जना पक्राउ, एक फरार
७ आश्विन २०७८, बिहीबार ११:४१
झापा– झापाको झापा गाउँपालिका वडा नं. १ मा एक महिलाको अर्धशरीर फेला परेको छ । माइखोलाको किनारमा एक महिलाको कम्मरभन्दा माथिको भाग मात्र फेला परेको हो । शवको प्रकृती हेर्दा शंकास्पद देखिएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र ईलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोदबाट थप अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी टोली खटिएको छ ।
मृतक महिला झापा गाउँपालिका वडा नं. १ माइती घर भएको र उनी हाल भारतको किसनगञ्ज जिल्ला सिंघिमारी ग्राम पञ्चायत बस्ने अन्दाजी ५०–५५ वर्षकी डोली भन्ने धोन्नी टुडु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । उनलाई गएको भदौ २४ गते राति माइखोला किनारमा हत्या फालेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
चार पक्राउ, एक फरार
सो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले मृतककै आफन्तसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मृतकको भान्जा भारतको किसनगञ्ज जिल्ला सिंघीमारी ग्राम पञ्चायतका २३ वर्षिय ऐतवार सोरेन, मृतकको सौताको भाई झापा गाउँपालिका वडा नं. १ का ३७ वर्षीय लखन टुडु सतार, सोही ठाउँका ५६ वर्षीय सिरी साईला भन्ने सोमाई हेमरम सतार र सोही ठाउँका २७ वर्षीया हेमरम सतार रहेका छन् ।
यस्तै भारतको किसनगञ्ज जिल्ला सिंघीमारी ग्राम पञ्चायतका मण्डल हेमरम सतार फरार रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । फरार रहेका व्यक्ति मृतकका देवर हुन् ।